Ipeyinti yeDijithali kaKare Huang ' Izidalwa ezikwi-Intanethi
'Idoli' ngumzobo wedijithali kaKare Huang
UManuel Ramirez | | Abadlali, Ukuphefumlelwa
Ukuba sifuna lo mculi kwi-DeviantArt siya kumfumana ngegama le-tommy830219. A Taiwan umbonisi wedijithali Esathi kwakhona sazisa umculi ozinikeleyo kakhulu kubugcisa kunye nobugcisa bedijithali obusivumela ukuba sihlangane namagama amatsha.
Isizathu sokuzisa uHuang kule migca kungenxa yomsebenzi owenziwe nge ezinye zeenkqubo esizaziyo sonke kwaye ibizwa ngokuba 'yiDoli'. Uyilo olwenziwe kakuhle apho lubonakala khona imigca echanekileyo netyebileyo kunye nephalethi yombala ekhethwe kakuhle ukusisa kuloo ndawo yabucala yale ntombazana ilele etafileni egumbini layo.
Leya ntombazana ilele naloo nto Yakha unodoli we-android phambi kwakhe kwaye ulahlekile amanye amalungu omzimba wakhe anjengemilenze. Inokukhumbula uAlita, ingelosi yokulwa, kodwa masimshiye njenge-Android.
U-Huang usisa emsebenzini owenziwe kakuhle kakhulu kunye eminye imigca engqindilili Apho iinkcukacha ezichanekileyo azixatyiswanga kodwa indlela ekhethekileyo yokusonwabisa ngalo mzekeliso.
Kukho amagcisa anesidanga esihle sobugcisa, iHuang ayikho kangako, kodwa phi Ibalasele ekubunjweni ngefestile ivuliwe kwaye amalengalenga aphantse ahamba phambi kwembono, okanye njengako konke ukukhanya kwelanga eliqaqambileyo kungena kuyo ngelixa intombazana icingelwa ukuba iyalala.
UTommy830219 unayo iDeviantArt yakho ukuze uqhubeke nomsebenzi wakhe, ibalulekile kuloo mivimbo kunye nemiboniso yemihla ngemihla enabalinganiswa abathandekayo kwizimbo zabo kunye nokukhanya okugcwele kwimisebenzi emininzi ayabelana ngayo kule webhusayithi eyaziwayo ngamagcisa kwaye apho kufumaneka khona italente eninzi.
Ukuba ujonge ngaphezu kwedijithali, apha.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Abadlali » 'Idoli' ngumzobo wedijithali kaKare Huang
I-Photoshop: izixhobo ezisibhozo zasimahla zabaqulunqi bewebhu
Isikhombisi sisixhobo esinamandla sokuphinda ubambe ifoto kwisixhobo sakho se-iOS